कन्चनको अ’बस्थालाई लिएर नि’राश हुदै बोले डाक्टर प्रदिप, नि’कै दु’ख लागेको छ ! (हेर्नुस् भिडियो) – Onlines Time
February 15, 2021 onlinestimeLeaveaComment on कन्चनको अ’बस्थालाई लिएर नि’राश हुदै बोले डाक्टर प्रदिप, नि’कै दु’ख लागेको छ ! (हेर्नुस् भिडियो)
१७ वर्षकी युवती र २१ वर्षका युवक एक अर्कालाई प्रेम गर्थे । उनीहरुले विवाह पनि गरे । तर परिवारले उनीहरुको विवाह स्वीकार गर्न नसकेका कारण युवतीले आफ्नो वयान फेरीन् । यु,वकसंग चितवन देखि काठमाडौं पुगेर युवकको आमाको अगाडी विवाह गरेकी यु,वती अर्को दिन माइत फर्किए पछि मलाई दवावमा पारेर विवाह गरियो भने पछि युवकले सहन सकेनन् । भिडियोमा आएका युवक र युवतीबीचको म्यासेन्जरमा भएका कुराकानीका आधारमा परिवारको द,वावमा आएर युव,तीले वयान फेरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
युवतीकै लागि आमाबुवा, संस्कार र धर्म समेत छोडेका युवकले युवतीको बदलिएको ब्यवहार सहन नसकेर वि ष से व न गरेका छन् । उनी अस्पतालमा उपचारार्थ छन् । घट,ना भएको चार दिन सम्म पनि उनको होस आएको छैन । युवतीको प्रेममा परेका २१ वर्षका युवक कञ्चनले यु,वतीकै धर्म अंगाले । उनी क्रि,श्चियन धर्म परिवर्तन गरेका कारणा धार्मीक कलेज समेत छोडेका थिए । युवतीकै लागि परिवारलाई पनि कन्भिन्स गरेका थिए । मेरो खुसी नै अनिशा हो त्यसैले मेरो प्रेम स्वीकार गर्नु भन्दै आमालाई उनले सम्झाएका थिए । त्यसैले छोराको लागि आमाले सबैकुरा स्वीकार गरिन् तर अहिले उही युवतीका कारण छोरा जिवनसंग सं,घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
१२ बर्षको कलिलो उमेरमा छोरीले दिइन आफ्नै आमाको दागबत्ती र क्रि*यापुत्रि पनि आफै बसिन् ( हेर्नुस् भिडियो )
दुखद खबर: क’रेन्ट ला’गेर रुख च’ढेकी युवतीको मृ’त्यु